Banyere Anyị - Ningbo enweghị Magnetik Co., Ltd
Ningbo enweghị Magnetik Co., Ltd, bụ ọkachamara ụlọ ọrụ aku Neodymium nju (NdFeB), Alnico nju, Samarium Cobalt nju (SmCo), ferrite nju (Efere nju) ígwé na nzukọ na Ningbo, China. Anyị na-enye mbụ na klas na-adịgide adịgide magnetik ngwaahịa.
Anyị nwere ike okorobịa na uche na a ghara ịkwụsị spirit, ime ihe niile nke ọma na kpọrọ ihe. Anyị na-etinye mgbalị nile n'ime ndọta, ya na ọtụtụ afọ 'ihe ọmụma na ahụmahụ. Anyị mepụtara ngwa ngwa na iji nwayọọ nwayọọ na na n'oge gara aga 10 afọ ga na-akpụ akpụ na.
Quality bụ mkpụrụ obi nke ngwaahịa na ndụ nke enterprise. Anyị na-azụ anyị mkpara ime ha nke ọma ịmụta nkà ha. Anyị nditịm mepụta Quality Management System: ISO9001: 2008, ISO / TS16949: 2009, na ISO14001: 2004.Advanced mmepụta na ule na ngwá hụ anyị ngwaahịa na-elu-anọgidesi na elu kwụsie ike. Ọtụtụ n'ime anyị elu ngwá si Germany na Japan, dị ka: ICP, i ulo, Laser Particle analyzer wdg Anyị nju-eme ihe ndị a chọrọ nke OA, RoHS, SGS na-apụghị Iru-agbasachaghị.
Anyị nju na-tumadi omenala mere dị ka choro, chọrọ na ngwa nke ndị ahịa. A dịgasị iche iche nke nju nwere ike ahaziri nke dị iche iche ihe onwunwe, ọkwa, mkpuchi, udi, akụkụ, magnetization direction, ibu, wdg Anyị nwere ike inye nju dị iche iche producible shapes ka diski, mgbaaka, rektangulu, cube, mmanya, cylinder, tile, nke , lamination, okirikiri na ụfọdụ ndị ọzọ pụrụ iche shapes. Ọzọkwa, anyị na-ama ihe ịga nke ọma uka emepụta na-adịgide adịgide nju nke kasị elu arụmọrụ akara ule N54,52M, 50H, 48SH, 45UH, 42EH na 38AH.
Anyị na-egosipụta na-amị mkpụrụ na-arụpụta bụ ezie na anyị na-na ibu ogbo ka mba ahịa. Anyị ike ọma ahịa mmekọahụ n'ụwa niile ahịa. Anyị kweere na anyị ga na-gị mma azụmahịa onye na n'ọdịnihu dị nso. Anyị nwere ike na-enye gị kacha mma mma ngwaahịa na ndị dị ọnụ ala price na kasị mma ọrụ. Guzosie ka a towering ibu nọ n'ebe ọwụwa anyanwụ, ofufe kpamkpam ke akwa mbara igwe. Enweghị ga na anọgide na-gị mma onye na ya nzọụkwụ nke internationalization atụmatụ.
Anyị n'anabata gị ka ị kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na i nwere ajụjụ ọ bụla banyere anyị ụlọ ọrụ na ngwaahịa. Anyị na-agbalị na-agwa, na-akụziri na-enye nke kacha mma ngwaahịa na ọrụ dị.
Na-atụ anya guzosie ike azụmahịa mmekọrịta gị na-akwanyere ùgwù ụlọ ọrụ.